IATA: Ọchịchọ ihu igwe nke ụgbọ elu na-egosipụta ebumnuche Net-Zero nke ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » IATA: Ọchịchọ ihu igwe nke ụgbọ elu na-egosipụta ebumnuche Net-Zero nke ụgbọ elu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu ụgbọ elu na 77th IATA AGM na Boston, n'October, kwetara iji nweta net-efu carbon anwuru site na 2050, n'usoro na gbatịa nkwekọrịta Paris iji mee ka okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ruo 1.5 degrees.
Nsonaazụ pụtara ìhè sitere na COP26 bụ mmegharị nke mba 23 ibinye aka na nkwupụta ihu igwe nke mba ụwa.
Nkwupụta ahụ na-amata mkpa ụgbọ elu ka ọ “na-eto nke ọma” ma kwughachi ọrụ ICAO iji mejuputa ebumnuche ihu igwe dị mkpụmkpụ, ọkara na ogologo oge maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ịhụ na arụmọrụ kacha mma nke Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, na mmepe na ibuga mmanụ ụgbọ elu na-adigide bụ isi ebumnuche nke nkwupụta ahụ.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA)) nabatara nkwa ndị a na-eme iji mee ka omume ihu igwe sikwuo ike na COP26, ma kpọkuo mgbalị zuru ụwa ọnụ iji decarbonize ụgbọ elu ka a kwadoro ya na atụmatụ gọọmentị dị irè.
Nlekọta nke nkwa ihu igwe nke ụgbọ elu mba ụwa na-anọdụ na mpụga usoro COP ma bụrụ ọrụ nke International Civil Aviation Organisation (ICAO). Ka o sina dị, ụgbọ elu na 77th obodo ntà AGM na Boston, Ọktọba, kwetara imezu ikuku carbon net-zero site na 2050, n'ikwekọ na nkwekọrịta nkwekọrịta Paris iji mee ka okpomoku zuru ụwa ọnụ ruo ogo 1.5.
"Ụgbọ elu ụgbọ elu na-aga n'okporo ụzọ ikuku carbon efu, n'ikwekọ na nkwekọrịta Paris. Anyị niile chọrọ nnwere onwe iji efe efe na-adịgide adịgide. Ịnweta ikuku net-efu ga-abụ nnukwu ọrụ chọrọ mbọ mkpokọta nke ụlọ ọrụ na nkwado sitere n'aka gọọmentị. Nkwa ndị e mere na COP26 gosiri na ọtụtụ gọọmentị ghọtara isi ihe na-eme ka ọganihu ngwa ngwa bụ ịkwalite mgbanwe teknụzụ na ego ngwọta ọhụrụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka mmanụ ụgbọ elu na-adịgide adịgide, nke ga-ekere òkè dị ukwuu n'ịgbasa mmetụta gburugburu ebe obibi nke ụgbọ elu - ha chọrọ nkwado ziri ezi sitere n'aka gọọmentị iji kwalite mmepụta ihe," kwuru. Willie Walsh, Onye isi Director IATA.
Nsonaazụ pụtara ìhè sitere na COP26 bụ mmegharị nke mba 23 ibinye aka na nkwupụta ihu igwe nke mba ụwa. Nkwuwapụta ahụ na-amata mkpa ụgbọ elu "na-eto nke ọma" ma kwugharịa ICAOỌrụ iji mejuputa ebumnuche ihu igwe dị mkpụmkpụ, ọkara na ogologo oge maka ụlọ ọrụ ahụ. Ịhụ na arụmọrụ kachasị nke Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) na mmepe na mbugharị mmanụ ụgbọ elu na-adigide (SAF) bụ ebumnuche bụ isi nke nkwupụta ahụ.
"Anyị nwere ekele maka steeti ndị bịanyere aka na nkwupụta ihu igwe nke mba ụwa na anyị na-agbakwa mba ndị ọzọ ume itinye aka na atụmatụ a. Atụmatụ siri ike na nke ezi uche dị na ya iji fefe efu efu site na 2050 nke ndị ụgbọ elu ndị otu anyị kwenyere nwere ike ịbara mba ndị otu ICAO uru nke ukwuu ka ha na-aga n'ihu na usoro zuru ụwa ọnụ yana ebumnuche ogologo oge maka mbelata ikuku ụgbọ elu," Walsh kwuru.